Umuthi Cefepim: imiyalelo yokusetshenziswa > Ukwelashwa nokuvimbela
Isikhathi sokukhamba (1 g) Isikhathi senkathi
Umgomo womphumela oyinhloko uhloselwe ekubhujisweni kodonga lweseli lweseli le-microbial, umuthi usebenza nge-bactericidal.
Umuthi ukhombisa ukusebenza okuphezulu kwe-antibacterial ngokumelene nama-trenea amelana nesenzo se-cephalosporins yesizukulwane sesithathu, aminoglycosides. Umuthi osebenzayo usheshe ungene kuseli elincane le-gram-negative, ngenkathi umelana nokuphikiswa okuphezulu kwe-hydrolysis yama-beta-lactamases amaningi. Okuhlosiwe kakhulu ngaphakathi kweseli isikhathi senkathi yeprotein iprotheni ebopha ipenicillin.
I-Cefepim elwa namagciwane isebenza kuma-gram-positive flora kanye nama-bacterium angenayo i-gram-negative ku-vitro naku-vivo: i-streptococci, i-enterobacteria, i-Escherichia coli, i-Klebsiella, i-clostridia, i-proteina, njll.
Izinkomba zokusebenzisa isikhathi sekhokhishi
Umuthi olwa namagciwane unqunyelwe ukuthi ungasilingani nesifundo. inyumoniyaokubangelwa yi-streptococci, i-enterococci, i-Klebsiella kanye nezinye izinto ezincane ezibucayi esenzweni somuthi.
Imiyalo yokusebenzisa i-Cefepima iqukethe izinkomba ezilandelayo zokusebenzisa umuthi: izilonda ezithathelwanayo zendlela yokuchama (amafomu ayinkimbinkimbi futhi angenabunzima), febrile neutropenia, izifo ezithathelwanayo ezilula zesikhumba nezicubu ezithambile eziseduze.
Umuthi uyanconywa ukuthi usetshenziswe eziluthweni eziyinkimbinkimbi ezithinta i-intra-abdominal les (ekuhlanganiseni i-metronidazole).
I-Cepepime ingadala ukungahambi kahle komzimba ngendlela yomkhuhlane, ukulunywa, ama-erythematous rashes esikhunjeni, i-necrolysis enobuthi, i-erythema multiforme, ukusabela kwe-anaphylactoid.
Ngokuphikisana nesizinda somuthi wokwelapha olwa namagciwane, kungenzeka ukuthi ubhalise ukusabela okuhle kwe-Coombs.
Ngokuphathwa kwe-intramuscular, soreness kanye nokubomvu endaweni yomjovo kuyaphawulwa, i-phlebitis akuvamile ukuba ikhule ngemuva kokufakwa kwe-intravenous.
Ipheshana lase-Urinary: ukuphazamiseka emsebenzini osebenzayo wohlelo lwezinso.
Ipheshana lokugaya: Izimpawu dyspeptic pseudomembranous colitis, ukuqunjelwa, izinhlungu ze-epigastric, ukugabha, isicanucanu.
Izitho ze-Hematopoietic: ukopha kakhului-anemia, i-leukopenia, ukwehla kwenani lamapuleti, ama-neutrophils.
Kusuka ohlelweni lokuphefumula kukhona ukukhwehlela.
Uhlelo lwenhliziyo: i-edema yangaphandle, ubuhanguhangu, umoya omfishane.
Izinkomba zezindlela zokucwaninga zaselebhu kanye nezinsizakalo:i-hypercalcemiaisikhathi esandisiwe se-prothrombin, hyperbilirubinemia, ukukhuphuka kwamazinga we-urea, ama-enzyme wesibindi kanye ne-alkaline phosphatase, ukubhaliswa i-hypercreatininemia.
Ngokuphikisana nesizinda sokwelashwa, ukuthuthukiswa kwe-oropharyngeal candidiasis, asthenia, izinhlungu esifubeni kungenzeka, amandla amakhuluUbuhlungu emuva nasemphinjeni.
I-Cefepim, imiyalo esetshenzisiwe (Indlela nomthamo)
Umuthi ukhishwa ukumiliselwa ngaphakathi (isikhathi sokufakwa kufanele okungenani sibe yisigamu sehora). Kwezinye izimo, ukuphathwa kwezitho zomzimba umuthi kuvunyelwe (kwizifo zohlelo lwe-genitourinary olubangelwa yi-E. coli).
Ukwelashwa kwezinduna: ukuphathwa okuphathelene no-1-2 amagremu ama-antibiotic kabili ngosuku izinsuku eziyishumi.
Ukwelashwa kokuqina febrile neutropenia: Ngenisa 2 amagremu umuthi umuthi njalo emahoreni ayi-8, ukwelashwa kwenziwa kuze kube yilapho isifo sesixazululwe ngokuphelele (ngokwesilinganiso sezinsuku eziyi-10).
Ukwelashwa kwezilonda ezithathelwanayo zepheshana lezakhi zofuzo: ukumiliselwa ngaphakathi kwe-0.5-1 amagremu wesikhathi sokukhamba njalo emva kwamahora ayi-12, inkambo yokwelashwa kwe-antibacterial yenzelwe izinsuku ezingama-7-10.
Ezimweni ezinzima zezifo ezingenhla, inani lemithi lenyuswa laya kumagremu ama-2, ukwelashwa kwenzelwe izinsuku eziyi-10.
Ngosuku lokuqala lokwelashwa kwe-antibacterial, iziguli ezithola i-hemodialysis zinikezwa i-gramu eyi-1 ye-cefepime, khona-ke i-gramu eyi-0.5 ithululelwa nsuku zonke (nge-febrile neutropenia, umthamo wenyuselwa ku-1 gram). Umuthi unconywa ukuthi uphathwe ngokushesha ngemuva kokuphothulwa kweseshini ye-hemodialysis.
Ungazalela kanjani isikhathi sokuzalwa komjovo wejovo we-intravenous: i-powder iyancibilika ngaphambi kokungenela kwikhambi le-5% le-dextrose (isodium chloride solution ka-0.9% kungenzeka) kuze kube yilapho sekuqedwe ngokuphelele. Ngaphambi komjovo we-intramuscular, umuthi ufakwa emanzini akhethekile wokujova nge-benzyl alcohol noma paraben. Mhlawumbe ukusetshenziswa kwekhambi lokuhlushwa kwe-lidocaine ye-0,5 ne-1%.
I-Cefepime iyakwazi ukwanda ototoxicity futhi uthuthukise umphumela omubi ohlelweni lwezinso ngenkathi ukwelashwa nge-aminoglycosides.
Umuthi olwa namagciwane awuhambisani ne-heparin nezinye izinto ezibulala amagciwane. Umuthi akufanele uphathwe kanye nekhambi le-metronidazole.
Isikhathi sasekuseni kumathebulethi asitholakali.
Umuthi ukhanseliwe ngokuthuthukiswa kwe-pseudomembranous colitis enesifo sohudo sesikhathi eside (kunconywa ukushintshela ku-metronidazole kanye ne-vancomycin).
Ezigulini ezinomlando wempendulo yokungezwani kwe-penicillin, ukwakheka kwe-cross-allergic hypersensitivity kungenzeka.
Iziguli ezinezifo zohlelo lwe-hepatic nezinso zidinga ukubhekwa njalo kokuxwalwa kwento esebenzayo egazini (ukulungiswa kwerejimeni yemithamo yenziwa ngokuya ngezinga le-QC).
Ngefomu elixubile lokutheleleka kwe-anaerobic-aerobic, kunikezwa umuthi owengeziwe wezidambiso ze-antibacter kuze kutholakale ngokuphelele ama-pathogens aphambili.
Ngokuphikisana nesizinda sokwelashwa, kungenzeka ukuthi ubhalise umphumela ongemuhle lapho wenza isivivinyo sikashukela somchamo.
Umsebenzi we-antibacterial womuthi awulahleki lapho umbala wesisombululo esilungiselelwe ushintsha.
I-Powder yesisombululo somjovo ongu-0.5 g no-1.0 g
Ibhodlela elilodwa liqukethe
into esebenzayo - cefepime hydrochloride (ngokuya kwesikhashana) 0.5 g noma 1.0 g,
owamukelayo - i-arginine.
Ngendlela ingxube ye-cefepime hydrochloride ne-arginine.
Umhlophe, ocishe ube mhlophe noma uphuzi okuphuzi, i-hygroscopic.
Isikhathi sokufinyelela ekuhlushweni okuphezulu kakhulu kokukhishwa kwe-cefepime ku-serum yegazi ngomjovo we-intramuscular ku-0.5 g ngamahora angama-1-2, ngokuphathwa kwe-intravenous ngethamo lika-0.5 g - ekugcineni kokufakwa. Ukugxila kwe-plasma okuyisilinganiso sokukhamba lapho kuphathwe khona ngaphakathi ngomthamo we-0,25 g, 0.5 g, 1 g no-2 g kukhona u-18, 39, 82, no-164 μg / ml, ngokulandelana, ngomjovo owodwa we-intramuscular at a umthamo we-0.5 g, 1 g no-2 g - 14, 30 no-57 μg / ml, ngokulandelana. Isikhathi sokufinyelela ekuhlolweni okuphakathi kwe-plasma kuma-awa ayi-12. Isilinganiso sokulashwa okujwayelekile sokuphathwa kwe-intravenous ka-0.7 μg / ml, ngokuphathwa kwe-intramuscular - 0,2 μg / ml. Ukugxila kokulashwa kwesikhashana senkomo kutholakala kumchamo, i-bile, uketshezi oluzimele, i-mucosa ye-bronchial, sputum, i-prostate, isithasiselo kanye nesinye. Umthamo wokusabalalisa 0,25 l / kg, ezinganeni kusuka ezinyangeni ezimbili kuya eminyakeni eyi-16 - 0,33 l / kg. It is metabolised in theibindi kanye nezinso ngo-15% ngokwenziwa kweN-methylpyrrolidine, ephenduka ngokushesha ibe yi-N-oxide ehambisanayo. Cishe i-80% yesikhathi sokukhishwa kwefucu ikhishwe ingashintshiwe emchameni, ikakhulukazi ngenxa yokufakelwa kobucwebe, okungaphansi kwe-1% yomthamo ophathisiwe utholakala emchamweni ngesimo seN-methylpyrrolidine. Ukubopha kwe-cefepime kumaphrotheni we-serum kungaphansi kwe-19% futhi akuxhomekile ekuhlakazweni kwe-antibiotic egazini. 85% ikhishwa yizinso yi-glomerular filtration engashintshiwe. Amapharamitha we-pharmacokinetic wesikhathi sokushona kwezingane ezinganeni ngemuva kokuphathwa kwe-intravenous ngethamo lika-50 mg / kg aqhathaniswa nokuvezwa kubantu abadala ngemuva komthamo we-intravenous we-2 g.I-bioavailability ngokuphelele yesikhathi sokuhlwa kweziguli eziyi-8 ngemuva komjovo we-intramuscular ngethamo lika-50 mg / kg kwaba ngu-82.3 (± 15)%. Ingena ubisi lwebele.
Ukukhishwa ngokuphelele kwesidakamizwa kungu-120 ml / min. Isilinganiso esisezingeni eliphakathi nendawo se-cefepime yi-110 ml / min. I-pharmacokinetics yesikhathi cefepime ayiguquki kakhulu ezigulini ezinenkinga yokusebenza kwesibindi noma nge-cystic fibrosis (ukulungiswa komthamo akudingeki). Ngokuhluleka kwe-reso, i-Half-life of cefepime iyanda, kuyilapho kunobudlelwano obuqondile phakathi kokukhishwa ngokuphelele kwesikhathi senkomo nokucaciswa kwe-creatinine. Ukuphila kwengxenye yesikhathi sokukhwehlela kungamahora ama-2, phakathi kwe-hemodialysis - amahora ayi-13, ngokuqhubeka kwe-ambitrate peritoneal dialysis - amahora angama-19 .Akunqwabelana emzimbeni.
I-Cephalosporin IV isizukulwane semithi elwa namagciwane. Isebenza nge-bactericidal, iphazamisa ukwakheka kodonga lweseli lwezinto ezincane. Inobubanzi besenzo. Isebenza ngokumelene namagciwane a-gram-positive ne-gram-negative, kufaka phakathi ama-bacterium amaningi amelana nama-aminoglycosides noma ama-antipatitis wesizukulwane sesithathu. Isikhathi se-Cepepime simelana kakhulu nesenzo sama-β-lactamases amaningi, sinobulungu obuphansi be-beta-lactamases efakwe yizinhlobo ze-chromosomal, futhi singena ngokushesha ngamagciwane angenawo gamu. Isilinganiso se-MBC (ubuncane be-bactericidal okuhlushwa) / i-MIC (ubuncane be-inhibitory okuhlushwa) isikhathi senkathi yenkomo singaphansi kuka-2 kokungaphezulu kwama-80% kokuhlukaniswa kwabo bonke ubuchwepheshe be-gram-positive ne-gram-negative.
Umuthi uyasebenza ngokulwa nezinhlobo eziningi zamagciwane.
Amagciwane a-gram-positive gram: I-Staphylococcusaureus,I-Staphylococcusi-genermidis (kufaka phakathi izingqimba ezikhiqiza i-beta-lactamase), ezinye izinhlobo ze-staphylococci, kufaka phakathi I-Staphylococcushominis,I-Staphylococcussaprophyticus,I-Streptococcuspyogenes (iqembu A streptococci),I-Streptococcusagalactiae (Iqembu le-Streptococcus B),I-Streptococcusinyumoniya (kufaka phakathi izingqimba ezinokulinganiselwa okuqinile kwe-penicillin - MIC kusuka ku-0.1 kuye ku-0.3 μg / ml), amanye ama-beta hemolytic streptococci (amaqembu C, G, F),I-Streptococcusbovis (iqembu D),I-Streptococcusama-viridan.
Izinhlobo eziningi ze-Enterococci, ngokwesibonelo I-Enterococcusfaecalis kanye ne-staphylococci emelana ne-methicillin imelana nesikhathi senkomo.
Isikhathi sokuphumula asisebenzi kwezinye izinhlobo I-Xanthomonas maltpphilia (Pseudomonas maltophilia).
I-Anaerobes: I-prevotella spp. (kufaka phakathi I-Prevotella melaninogenicus) Ama-bacteriides spp., kufaka phakathi Ama-bacteriides melaninogenicus nezinye izinto ezincane zezitho zomlomo womlomo ezihlobene Ama-bacteriides, uClostridium perfringens, I-Fusobacterium spp., I-Mobiluncus spp., I-Peptostreptococcus spp., I-Veilonella spp. Isikhathi sasekuseni asisebenzi ngokumelene Ama-bacteriides fragilisfuthiClostridium ubunzima.
Umuthi uphathwa ngaphakathi (kancane kancane imizuzu engama-3-5) kanye ne-intramuscularly (ekujuleni komsipha). Uhlobo lomthamo lusethwe ngokuhlukile, kucatshangelwa ubunzima besifo, uhlobo lwe-pathogen kanye nokuzwela kwayo isikhathi sokuya esikhathini. Indlela yokufaka eyokuphatha ifunelwa ezigulini ezinezifo ezinzima noma ezisongela impilo, ikakhulukazi ngengozi yokushaqeka.
Abantu abadala nezingane ezinesisindo esingaphezu kwama-40 kg izifo ezithinta umchamo - izikhathi ezi-0.5-1 g 2 ngosuku,
ngokutheleleka kwendawo ehlukile - i-1 g ngokungena emzimbeni noma ngokuqina njalo emahoreni ayi-12, enezifo ezinzima, umthamo wenyuswa uye ku-2 g izikhathi ezi-2 ngosuku,
kwezifo ezisongela impilo, 2 g ngokulangazelela njalo emahoreni ayi-8 ngezinsuku eziyi-7, ulethe umthamo ophelele nsuku zonke wokufika ku-12 g,
nge-febrile neutropenia - ama-2 g nge-intravenly njalo emahoreni ayi-8 ezinsukwini eziyi-7,
ekuvinjelweni kwezifo zokuhlinza esikhathini sangaphambi nangemva kokusebenza - 2 g ngokulangazelela imizuzu engama-30 (ekugcineni kokuphatha, i-metronidazole 500 mg isetshenziswa ngokungeziwe) ngehora eli-1 ngaphambi kokuhlinzwa, phakathi nokusebenza isikhathi eside, ukuphathwa okuphindaphindiwe ngemuva kwamahora ayi-12 ngethamo elifanayo kunconyelwe , kulandelwa ukwethulwa kwe-metronidazole.
Ekungeneleleni kwezifo zomgudu womchamo okulula (kufaka phakathi i-pyelonephritis), inyumoniya, kanye nokwelashwa okunamandla komkhuhlane we-neutropenic ezinganeni ezinesisindo esingaphansi kwama-40 kg - 50 mg / kg njalo emahoreni ayi-12.
Ngomkhuhlane we-neutropenic, i-bacterial meningitis ezinganeni ezinesisindo esingaphansi kwama-40 kg - 50 mg / kg njalo emahoreni ayi-8.
Uma kwenzeka umsebenzi wezinso ongasebenzi kahle, umthamo kufanele ulungiswe. Ngokucaciswa kwe-creatinine ka-30-60 ml / min, kuya ngobunzima besifo - 0.5, 1 noma 2 g izikhathi ezi-2 ngosuku, lapho imvume ye-creatinine ingama-10-30 ml / min - 0.5, 1 noma 2 g 1 isikhathi ngosuku. imvume ye-creatinine
Izinhlobo zemithamo yesikhathi sokukhamba:
I-powder yokulungiswa kwesisombululo sokulawulwa kwe-intramuscular (IM): kusuka kokumhlophe kuye kokumhlophe nge-tint ephuzi, i-0.5 g noma i-1 g ngalinye ku-vials: ebhokisini lekhadibhodi lezilokotho eziyi-10 noma ezingama-50 (zesibhedlela), ebhodleleni elinenqwaba 1 ibhodlela, kwibhodlela lekhadibhodi 1 ibhodlela eliphelele elinesolvent (1 ingilazi yeglasi engu-3,5 ml ngayinye enesixazululo se-lidocaine somjovo 10 mg / ml), ekhadibhodi isixha sebhodlela elingu-1 eliphelele nge-solvent (1 ingilazi yeglasi ngalinye le-3,5 ml ngesixazululo se-lidocaine ngomjovo 10 mg / ml kanye no-1 ampoule ongu-5 ml wamanzi wokujova), 1 g ngezilinganiso, ebhokisini lekhadibhodi e is 5 noma 30 vials
i-powder yokulungiswa kwesisombululo sokuphathwa kwe-intravenous (iv) ne-intramuscular (i / m): emhlophe nge-tint ephuzi engu-0.5 g ebhodleleni, ebhokisini lekhadibhodi 1 ibhodlela, ebhokisini lekhadibhodi lamabhodlela ayi-10, 50, 270 noma ama-300 (esibhedlela), i-0.5 g noma i-1 g lilinye emabhodleleni, emaphepheni aqhakaza amabhodlela ayi-1 noma ama-5, ekhakhini eliqukethe okugcwele okugcwele okugcwele 1 noma ama-5 ampoules wengilazi okuphelele (amanzi okujovo), 1 g ngalinye amabhodlela, ebhodweni elinenqwaba 1 ibhodlela, ebhokisini lekhadibhodi 10, 14, 25, 50, 270, 300 noma 1000 amabhodlela (esibhedlela), 2 g ebhodleleni, ekhadibhodi 1 ibhodlela iphakethe, e, ngaphatha ibhokisi elinezincwadi 50 noma 300 izitsha eziyisikhombisa (isibhedlela).
Ebhodleleni eli-1 elinophawuda wokuphatha i / m kuqukethe:
into esebenzayo: i-cefepime hydrochloride monohydrate ngokuya ngesikhathi sokukhamba - 0.5 g noma 1 g,
isiza elisizayo: i-arginine.
Ebhodleleni eli-1 elinempuphu ye-iv ne-v / m ukuphatha kuqukethe:
into esebenzayo: cefepime hydrochloride ngokuya ngesikhathi sokukhwehlela - 0.5 g, 1 g noma 2 g,
I-bioavailability yesikhathi sokukhamba ingu-100%.
Ubukhulu bokuhlushwa (Cmax) isidakamizwa esise-plasma yegazi esine-drip eyodwa ye-1000 mg yesikhathi sokukhumbula amahora angu-0,0787 mg / ml amahora angama-0.5 ngemuva kokuphothula ukumiliselwa. Ngemuva kwamahora ayi-12, okuqukethwe kwezidakamizwa ezilinganisweni ze-plasma zegazi kungu-0.0006 mg / ml. I-jumla okuhlushwa (AUC) yesidakamizwa ku-plasma ngaphezulu kwehora ngu-0.1485 mg / ml.
Ngemuva kokuphathwa kwe-i / m, ukumuncwa kwe-cefepime kwenzeka ngokuphelele. Cmax ngesingeniso / m, i-1000 mg yesidakamizwa ifinyelela ku-0,0263 mg / ml ngemuva kwamahora ama-2. I-AUC - 0,137 mg / ml / h.
Umthamo wokusabalalisa ngokwesilinganiso kubantu abadala ngu-0.25 l / kg, ezinganeni - 0,33 l / kg.
Cishe i-20% yomthamo olungiselelwe ubopha amaprotheni e-plasma.
Isikhathi sokuhlanza ekujuleni okukhulu sinqunywa ku-peritoneal fluid, umchamo, i-bile, i-blallder, i-sputum, i-mucosa ye-bronchial, i-bludate, i-Prostate gland kanye nesithasiselo.
Isigamu sempilo singamahora ama-2, nge-hemodialysis - amahora ayi-13, ngokuqhubeka kwe-peritoneal dialysis - amahora ayi-19.
Cishe u-15% womthamo uvuselelwa esibindini nasezinso, cishe ama-85% akhishwe engashintshiwe emchameni.
I-Powder yokulungiswa kwesisombululo sokulawulwa kwe-iv kanye / m
pneumonia elinganiselayo futhi elinzima libangelwa i-Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae (kufaka phakathi amacala ahlotshaniswa ne-concomitant bacteremia), Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp.
i-pyelonephritis nezinye izifo ezingekho lula futhi eziyinkimbinkimbi ezithinta ipheshana lomchamo elibangelwa yi-Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis,
febrile neutropenia - ukwelashwa okunamandla,
ukutheleleka okuyinkimbinkimbi kokuya esiswini okubangelwa i-Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Bactero>
Ukusetshenziswa kwesikhathi sokukhamba kungenzeka kuphela ezimweni ezihlukile, lapho umphumela olindelekile wokwelashwa kukamama udlula kakhulu usongo olungaba khona kuzingane:
ngesimo sempuphu yokulawulwa kwe-IV ne-IM - ku-trimesters ye-II ne-III yokukhulelwa (i-trimester kuwukuphikisana okuphelele kwaleli fomu lomthamo),
ngesimo se-powder yokulawula i / m - sonke isikhathi sokukhulelwa.
Ukusetshenziswa kwesidakamizwa ngesikhathi sokuqunjelwa kuyaphulwa. Ukuze uthole izinkomba zomtholampilo ezidinga ukuphathwa kokhokho, ukuncelisa ibele kufanele kuyekwe okwesikhashana.
Ngokusebenzisa kanyekanye isikhathi sokukhamba:
i-aminoglycosides, i-diuretics, i-polymyxin B ibangela ukuncipha kokukhushulwa kweshubhu kwesibeletho, ikhulisa isikhathi sempilo futhi ikhuphule ukuqina kwayo egazini, ikhuphule i-nephrotoxicity,
izidakamizwa ezingezona ze-steroidal ezilwa nokuvuvukala zisiza ukubambezela ukuqedwa kwe-cephalosporins, zandise ingozi yokopha,
ama-macrolides, i-chloramphenicol, ama-tetracyclines akhombisa ukumelana nomuthi,
Umuthi akufanele uhlanganiswe kwisirinji efanayo nesixazululo se-metronidazole, i-nenamicin, i-vancomycin, i-tobramycin, i-aminophylline noma i-netilmicin. Uma kunesidingo, ukuqokwa kanyekanye kwesidakamizwa ngasinye kufanele kuphathwe ngokuhlukile.
I-Ampicillin nezixazululo zekhonkrithi zingaxutshwa kwisirinji eyodwa ekuqoqweni ngakunye kuzo okungaphakeme kune-40 mg nge-1 ml.
Ama-analoggues wesikhathi sokudubula yilezi: Maksipim, Ladef, Movizar, Tsepim, Efipim.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa ngeCefepim, iziguli kufanele zifunde ngokucophelela imiyalo ehambisana nalokhu. Imijovo ayinqunyelwe uma iziguli zinesimo esisodwa noma ngaphezulu:
iminyaka yezingane ukuya ezinyangeni ezi-2 (ukuphathwa kwe-intravenous) - lokhu kungenxa yokuntula isipiliyoni ekusebenzeni nasekuphepheni okungafakazeki,
iminyaka efinyelela eminyakeni eyi-12 yokujova umuthi wokuthambisa emzimbeni,
ukungabekezeleli ngomuthi ngamunye,
amacala okuvela okukhulu kokungezwani namagciwane avela eqenjini lama-cephalosporins,
I-hypersensitivity kuma-penicillin - ukungabekezeleli okungenzeka kwe-cephalosporins,
pseudomembranous colitis, kubandakanya umlando we
Ukuhlukumeza okuhlobene nokuphathwa kwemijovo yeCefepim izifo zesibindi ezingapheli, i-ulcerative colitis, iziguli ezingaphezu kweminyaka engama-65.
Kwi-trimester yokuqala yokukhulelwa, imijovo ye-cefepim ayabekelwa omama abakhulelwe, ngoba isithako esisebenzayo se-antibiotic singena kalula emgomeni we-placental futhi singavusa ukukhula kwezimpawu nokukhubazeka ku-fetus.
Kuma-trimesters wesibili nowesithathu wokukhulelwa, ukusetshenziswa kwe-antibiotic kungenzeka kuphela uma inzuzo elindelwe kunina ibala ubungozi obungahle buvele kuzingane. Ukwelashwa kwenziwa esibhedlela ngaphansi kokuqashwa ngokuqinile kodokotela.
Ukusetshenziswa kwemijovo yeCefepim ngesikhathi sokuncelisa ibele kwezinye izimo kudinga ukuqedwa kokuqunjelwa, ngoba into esebenzayo yesisombululo ikhishwe obisini nasemzimbeni wengane.
Ngesikhathi sokwelashwa ngemijovo yeCefepim, iziguli ezine-hypersensitivity to cephalosporins zingahle zithole imiphumela emibi ekhonjiswa ngokwelashwa kanjena:
kusuka ohlelweni lwezinzwa - ukuphathwa ikhanda, ukozela, ukuqina, ukunganakwa, i-paresthesia, ukwazi ukungasebenzi kahle, ukukhishwa inyumbazane, ukubethela kokuhlinzwa,
ovela ohlelweni lokugaya ukudla - izilonda zokulimala kwezicubu zomlomo, isicwebezelisi esidabukisayo, ukuqaqamba kobuhlungu emlonyeni nolimi, ukushaya kwenhliziyo, ukubopha, isicanucanu, ukuntuleka kwesifiso sokudla, ukugabha, isifo sohudo esingavimbeleki, ukuqina kwesibindi, ukuwohloka kwesibindi, ukuqina kokuhluleka kwesibindi ,
ukungezwani komzimba - i-urticaria, i-pruritus, i-dermatitis, i-necrolysis enobuthi, ukuthuthukiswa kwe-angioedema, ukushaqeka kwe-anaphylactic,
kusuka ezithweni ze-hemopoietic - i-leukopenia, ukwehla kwesibalo seplatelet, i-agranulocytopenia, i-hemolytic anemia, ushintsho ngesikhathi se-prothrombin phezulu,
kusuka ezithweni zohlelo lobuchwepheshe - umsebenzi wezinso okhubazekile, ukuthuthukiswa kwe-nephritis ye-interstitial, ukuthuthukiswa kokwehluleka kwe-renal acute,
kusuka ohlelweni lokuzala - i-dysbiosis yesitho sangasese sowesifazane, ukuluma kwezitho zangasese, ukuqubuka, ukubukeka kokuphuma komfazi ngephunga elingathandeki,
engxenyeni yesistimu yokuphefumula - ukukhwehlela, izinhlungu esifubeni lapho kubulawa umoya, i-bronchospasm, ubunzima bokuphefumula, umuzwa wokuntuleka komoya,
kusuka ohlelweni lwezinhliziyo - izinhliziyo zikanokusho, ukuphefumula, ukuvuvukala kwemikhawulo,
imingcele yeelebhu - ukwehla kwe-hematocrit, ukwanda kokuxineka kwe-urea, ukukhuphuka kwezinga le-calcium ne-creatinine egazini,
ukusabela kwendawo - ukubhoboza i-venous, ukwakheka kwe-hematoma, ukuvutha kanye nobuhlungu emithanjeni ngesikhathi sokuphathwa kwezidakamizwa, i-phlebitis, i-thromboembolism, ngokuphathwa kwe-intramuscular of the antibiotic, infiltrate pain, redness, and ukulunywa kwefomu lesikhumba endaweni yomjovo.
Uma kwenzeka isiyezi, ukuphefumula, ukukhuphuka kokujuluka noma ukuba mnyama emehlweni ngesikhathi sokuphatha umuthi ngaphakathi, kufanele wazise udokotela wakho ngalokhu futhi uyeke ukumnika.
I-overdose ye-antibiotic kungenzeka uma isiguli sithatha imijovo isikhathi eside noma ngenhloso sidlula isilinganiso esinconyiwe somuthi. Ngokomtholampilo, izimpawu ze-overdose zibonakaliswa ngokwanda emiphumeleni emibi echazwe ngenhla, ukuthuthukiswa kwe-renal, inhliziyo nesibindi ukwehluleka, i-encephalopathy.
Ukwelashwa kwe-overdose kuqukethe ukuqedwa kwezokwelapha ngokushesha, i-hemodialysis esigulini kanye nokuqedwa kwezimpawu zokuphuza i-antibiotic.
Ama-analoggs emijovo ye-cefepim
Izinhlu zezidakamizwa Cefepim yilezi:
Sinamathela i-powder ukuze kulungiselelwe isisombululo semijovo,
I-Ladef powder yokulungiswa kwesisombululo semijovo,
I-Movizar powder yokulungiswa kwesisombululo.
Lapho ubuyisela umuthi obekiwe nge-analogue ekhonjisiwe, kufanele unake kakhulu umthamo we-antibiotic.
Izimo zokuphumula nezokugcina
I-Cefepim powder isatshalaliswa emakhemisi ngomuthi kadokotela. Kunconywa ukugcina izimbiza zomuthi esiqandisini noma endaweni emnyama epholile. Gwema kude nezingane.
Isixazululo semijovo silungiswa ngokushesha ngaphambi kokuphathwa. Musa ukugcina ikhambi eliqediwe kuze kube ngomjovo olandelayo!
Impilo yeshalofu eyimpuphu yiminyaka emi-2, ungasisebenzisi isidakamizwa ngempilo yeshalofu ephelelwe yisikhathi.
Imiyalo yokusebenzisa ukhokho wesikhashana, umthamo
I-Powder yomjovo we-intramuscular
Isixazululo esiphelile senzelwe kuphela ukuphathwa kwe-intramuscular.
Ungayisebenzisa kanjani ukucwilisa isikhathi sokukhamba sokuphathwa kwemithambo yegazi? Izinyibilikhi ezilandelayo zingasetshenziswa ukuncibilikisa i-powder: amanzi angenantambo ngomjovo, isisombululo se-glucose esingu-5%, isixazululo se-0.9% sodium chloride yomjovo, amanzi we-bacteriostatic wokujova nge-benzyl alcohol noma i-paraben, 0.5% noma 1% solution ye-lidocaine hydrochloride . Ukwethulwa kwe-0.5 g kafulawa, kufanele kuchithwe ku-1,3 ml, ukuze kungeniswe i-1 g ku-2.4 ml ye-solvent.
Udokotela unquma umthamo nesikhathi sokulashwa ngokusekelwe kwizinkomba zomtholampilo, ubulukhuni bokutheleleka kanye nesimo sezinso esisebenzayo.
Umthamo wesikhathi sokukhamba unconywe yimiyalo esetshenziswayo ngu-0.5-1 g njalo emahoreni ayi-12, inkambo yokwelashwa yizinsuku ezingama-7-10. Ngomsebenzi we-renal ophazamisekile nge-creatinine clearance (CC) engaphansi kwama-30 ml / min, iziguli kudingeka zilungise irejimusi yomthamo. Umthamo wokuqala umthamo ojwayelekile wesidakamizwa.
Ukulungiswa kwekhambi lokuphathwa kwe-iv nokuphathwa kwe-intramuscular
Isixazululo esenziwe ngomumo seCefepime sihloselwe ukuphathwa kwemisipha (kuphela ekwelapheni izifo ezingenamikhawulo eziyinkimbinkimbi futhi ezinobunzima obudalwa yi-Escherichia coli) noma ukuphathwa kwe-jet kanye ne-Drip iv.
Ukulungiselela isixazululo somjovo we-iv, kuyadingeka ukwengeza i-10 ml yesinye sol solution kuya ku-1 g yokulungiselela: amanzi angenamithi wokujova, isixazululo esingu-5% dextrose (ushukela), isisombululo se-0.9% sodium chloride. Isixazululo esiphelile senziwa ngaphakathi kwemizuzu engu-3-5.
Ukulungiselela isixazululo se-iv drip, ungasebenzisa enye yezixazululo ezilandelayo: isixazululo se-0.9% sodium chloride, isisombululo se-sodium lactate, 5% noma i-10% dextrose (glucose) solution, ingxube ye-Ringer's lactate ne-5% dextrose solution, ingxube 5 I-% dextrose solution kanye ne-0.9% sodium chloride solution. Okuqukethwe kwe-vial (1 g kafulawa) kuqala ngokuhlakazwa ku-5-10 ml wesinye salezi zixazululo, bese kuxutshwa ethangini lokufaka nesisombululo esifanayo, sikulethe ku-50 ml noma ku-100 ml. Isikhathi sokufakwa yi-30 imizuzu.
Ukulungiselela isixazululo somjovo we-intramuscular, ungasebenzisa amanzi oyinyumba ngomjovo, isixazululo esingu-0.9% se-sodium chloride noma isisombululo se-lidulinine hydrochloride engu-0.5-1%. Kwi-1 g kafulawa, u-2.4 ml we-solvent kufanele ungezwe ku-vial. Umjovo we-Intramuscular kumele wenziwe ngemuva kwesifiso sokuqala sokugwema ukuthola inaliti esitsheni bese wethula isisombululo egazini (ikakhulukazi i-lidocaine)! Isixazululo sifakwa ujule ngaphakathi komsipha ku-quadrant ephezulu yangaphandle yethumbu.
Kuzo zonke izixazululo ezilungiselelwe, ukuba khona kwanoma yiziphi izinhlayiya akuvunyelwe!
Ukwelashwa kwezinduna: ukuphathwa kwe-1-2 amagremu ama-antibiotic kabili ngosuku izinsuku eziyishumi.
Ukwelashwa okuqinisa amandla kwe-febrile neutropenia: njalo emahoreni ama-2, ukuphatha amagremu ama-2 womuthi umuthi, ukwelashwa kwenziwa kuze kube yilapho isifo sesixazululwa ngokuphelele (ngokwesilinganiso sezinsuku eziyi-10).
Ukwelashwa kwezilonda ezithathelwanayo zomgudu we-genitourinary: ukumnika okwenziwe ngaphakathi kwe-0.5-1 amagremu wesikhathi sokukhamba njalo ngamahora ayi-12, inkambo yokwelashwa kwe-antibacterial yenzelwe izinsuku ezingama-7-10.
Uma i-pseudomembranous colitis enesifo sohudo isikhathi eside, yeka ukuyithatha bese unquma i-vancomycin (ngomlomo) noma nge-metronidazole.
I-Cross-hypersensitivity kungenzeka ezigulini ezinemizwa engezwani nama-penicillin.
Ngokuhlanganiswa okunganele kwe-renal ne-hepatic, ukugcwala kwe-plasma yomuthi kufanele kunqunywe njalo (ukulungiswa kwamthamo kwenziwa kuye nge-CC).
Ngokulashwa isikhathi eside neCefepim, kufanele kuqashelwe njalo igazi le-peripheral, isibindi kanye nezinso zokusebenza kwesimo sezinso.
Ekuthelelekeni kwe-aerobic-anaerobic, ukukhonjwa kwamagciwane kudinga ukuhlanganiswa nezidakamizwa ezisebenzayo ezilwa ne-anaerobes.
Iziguli ezinokusakazeka kokuya esikhathini endaweni ekude yokutheleleka zisola ukuthi i-meningitis noma ukutholwa kwe-meningitis kuqinisekisiwe, enye indlela elwa namagciwane esebenza ngempumelelo yomtholampilo eqinisekisiwe ngalesi simo kufanele inqunywe.
Ukutholwa kokuhlola okungahle kube khona kwe-Coombs, ukuhlolwa okuyiphutha kwe-glucose kumchamo.
Gcina isixazululo sekhandlela esilungiselelwe isikhathi esidlule samahora angama-24 ekushiseni kwegumbi noma izinsuku eziyi-7 esiqandisini. Ukushintshwa kombala akuwuthinti umsebenzi wesidakamizwa.
Umyalo uxwayisa ngamathuba okuthuthukisa imiphumela elandelayo emibi lapho kunqunywa uCefepim:
Imiphumela yokungezwani komzimba: ukuqunjelwa isikhumba (kufaka phakathi ukuqubuka kwe-erythematous), ukulunywa, umkhuhlane, ukusabela kwe-anaphylactoid, kuhlanganisa ukusabela okuhle, i-eosinophilia, i-erythema multiforme exudative (kufaka phakathi i-Stevens-Johnson syndrome), kuyaqabukela - ubuthi be-epidermal necrolysis (syndrome ULyella).
Ukuphendula kwendawo: ngokuphathwa kwe-iv - i-phlebitis, ngokuphathwa kwe-intramuscular - hyperemia kanye nobuhlungu endaweni yomjovo.
Ukusuka ohlelweni lwezinzwa: ikhanda, isiyezi, ukuqwasha, i-paresthesia, ukukhathazeka, ukudideka, ukwehluleka.
Esistimeni sofuzo: i-vaginitis.
Kusuka ohlelweni lomchamo: ukungasebenzi kahle kwezinso.
Ukusuka ohlelweni lokugaya ukudla: isifo sohudo, isicanucanu, ukuhlanza, ukuqunjelwa, ubuhlungu besisu, i-dyspepsia, i-pseudomembranous colitis.
Kusuka kwizitho ze-hemopoietic: i-anemia, i-thrombocytopenia, i-leukopenia, i-neutropenia, i-pancytopenia, i-hemolytic anemia, ukopha.
Kusuka ohlelweni lokuphefumula: ukukhwehlela.
Ku-CCC: i-tachycardia, ukuphefumula, i-edema yangaphakathi.
Izinkomba zaselabhorethri: ukwehla kwe-hematocrit, ukwanda kwesikhathi se-prothrombin, ukwanda kokuhlungwa kwe-urea, i-hypercreatininemia, i-hypercalcemia, ukwanda komsebenzi we-hepatic transaminases kanye ne-alkaline phosphatase, ne-hyperbilirubinemia.
Umphumela: umphimbo obuhlungu, ubuhlungu besifuba, ukujuluka, ubuhlungu emuva, i-asthenia, ukuthuthukiswa kwe-superinfection, oropharyngeal candidiasis.
Kuphikisiwe ukuthi kunikezwe isikhathi sokukhishwa kwecala ngesikhathi samacala alandelayo:
Kukhona ukwanda kwemiphumela emibi. Izimpawu zokweqisa ngokweqile ukudideka, ukubona izinto ezingekho emzimbeni, ukuqina, ukukhohlisa, ukuqaqamba kwemizwa.
Ukwelashwa okubonakalayo. I-Hemodialysis iyasebenza.
Ama-analog weCefepim, inani lentengo emakhemisi
Uma kunesidingo, ungangena esikhundleni seCefepim nge-analogue yento esebenzayo - lezi izidakamizwa:
Lapho ukhetha ama-analogues, kubalulekile ukuqonda ukuthi imiyalo yokusebenzisa i-Cepepim, intengo nokubuyekezwa ayisebenzi kwizidakamizwa ezinomphumela ofanayo. Kubalulekile ukuthola ukubonisana nodokotela hhayi ukwenza ushintsho oluzimele lomuthi.
Inani lentengo emakhemisi aseRussia: Cefepim powder 1 g 1 fl - kusuka kuma-ruble angama-88 kuya kwayi-112, ngokusho kosokhemisi abangama-729.
Gcina emazingeni okushisa aze afike ku-30 ​​° C endaweni emnyama. Impilo yeshelf iyiminyaka emi-2.